Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / UNGAYIKHETHA KANJANI INDLELA YOKUNGCWELE YOKUNGCOLA
2020 / 11 / 18 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4603 0
Noma kunini lapho ukhetha ukulungisa kabusha izindlu zakho zangasese, ubhekene nezinqumo eziningi. Ngabe uzonamathela kudizayini yamanje noma uyibuyise kabusha? Yiluphi uhlelo lombala ongathanda ukulusebenzisa? Yiziphi izinto ongathanda ukuzengeza? Ngokuzizwa kwakho ngokwakho, futhi, kuzodingeka unqume ukuthi yiluphi usinki ekhishini olungcono kunaluphi uhlobo lwamayunithi owadingayo. Ngaphezu kwalokho, uzodinga ukukhetha ompompi bokugeza.
Ukusiza emizamweni yakho yokusiza wenze ukukhetha okungcono kakhulu, nakhu ukubheka lokho ozodinga ukukuthola lapho ukhetha indlu yangasese ompompi besaphulelo ku-inthanethi.
UMSEBENZI wokukhetha ompompi bokugeza
Oompompi bokugeza yizinhlobo zezici ongaziqapheli uze ulungise indawo. Idizayinelwe ukulawula ukuthi amanzi ahamba kanjani futhi kuphi echibini, ompompi bayizinto zokuhlanza ezidingekayo, kepha ziyatholakala ezintweni eziningi nasemiklamweni. Kubantu abaningi, ompompi yizinto zokuqeda ukwakhiwa kwendlu yangasese. Uzothatha kanjani isinqumo ngento ezwakala njengesengezo kepha iyisici esidingekayo? Kuthiwani uma kwenzeka ubheka noma nini lapho ukhetha ompompi abahamba phambili bokugezela besikhala sakho?
Izinhlobo Zompompi Ziyatholakala
Ngaphakathi emakethe yokugezela elayishwe amathuba, kunezinhlobo eziningi eziyisisekelo zompompi ezilungele kakhulu. Ngenkathi kusekhona amanye amamodeli ngaphandle kwalezi zinto eziyisisekelo, nazi izinhlobo zompompi ezivame kakhulu:
Lolu hlobo lwompompi lunomphetho nezibambo ezimbili ezinamathiselwe epuletini, okwenza umpompi owodwa owenzelwe amasinki anezimbobo ezintathu zompompi ezibekwe zihlukaniswe ngamasentimitha amane.
Umpompi osakazekile unesinye isibambo nezibambo ezihlukanisiwe, ngasinye sibekwe ngokuzimela emigodini emithathu kusinki.
Isinki elinembobo eyodwa linalokho ncamashi - umgodi ngamunye lapho empeleni isinki ifakwa khona. Ngokuvamile ukudala ukubukeka kwanamuhla, la mathinta futhi agcina isikhala ngokuthatha ngokuqinile okungaphansi kwe-counter-top.
Isinki eboshelwe odongeni isusa usinki echibini lasekhishini ngokuphelele ngokuyifaka esakhiweni sodonga ngaphezu kosinki wasekhishini, esikhundleni salokho. Ilungele osinki bezikebhe noma eminye imiklamo engenazo izimbobo zompompi, lolu hlobo lwosinki ludinga ukufinyelela emthonjeni wamanzi ngolwelwesi lodonga, olungadinga ukuphinda lunikezwe kabusha. Uma usuvele unompompi othile engqondweni, kulula ukuthenga ukukhethwa kwezitayela ngesizathu salolo hlobo bese ukhetha eyinhloko oyithandayo. Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi umpompi ozowukhetha, noma kunjalo, uzofuna ukwahlulela ngokuqhubekayo.
Imibuzo okufanele icatshangelwe
Ukuze unqume ukuthi yimaphi ompompi abalingana kahle izindlu zakho zokugezela, lokhu kuyisethi yemibuzo efanele ukubuyekezwa emsebenzini wakho wokuklama:
Yini elingana nosinki wakho wasekhishini?
Isinki oyisebenzisayo ithinta ngqo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ozoyikhetha ngoba ufisa umpompi ofanelana nokuvula imbobo onakho. Uma ubuyisela kabusha ipayipi lakho kusinki yekhishi osunesikhathi esithile noma uthenga usinki omusha ukuze uhambe nokuthenga okusha kosinki, thola ukuthi yiluphi uhlobo lwegebe oludingayo ukuze uhlale - umgodi owodwa , izikhungo, ezivamile noma udonga ukukhweza?
Yiziphi izici ozifunayo?
Enye yezingxenye ezinhle kakhulu zemakethe yanamuhla yompompi kuzo zonke izinketho zakho ezitholakalayo. Ngabe ufuna umpompi ogeleza kancane, isibonelo, ukusiza ukonga amanzi? Ngabe ubucabanga nge-aerator enganciphisa ukusetshenziswa kwamanzi okujwayelekile futhi isebenzise kancane? Ungahle ucabangele ukuthepha okungenazandla okwenziwe kushukumise ukuqala lapho ubeka izandla ngaphansi bese uyama lapho uzisusa. Kukhona futhi ompompi bokulwa namagciwane abasebenza nge-ozone abenziwe ukuqeda amabhaktheriya emanzini akho ajwayelekile ekhaya. Hlola izinketho ukuze ubone okubonakala kubaluleke kakhulu kuwe.
Yikuphi ukuphela kokugcina okukhethayo?
Imakethe yompompi yanamuhla ifaka phakathi izinhlobonhlobo zamaphethelo: okuphucuziwe okungenasici-, i-nickel ebhulashiwe, i-nickel epholishiwe, i-nickel ebhulashiwe, i-nickel ekhandiwe, i-stainless, i-bronze, i-bronze yethusi, i-bronze-rubbed bronze, i-ceramic plus more. Qonda egumbini lokubukisa ekhishini noma useshe isitolo esenzelwe wena ukuhlola izinketho bese uthola ukuthi ubukeka kanjani.
Siyini isabelomali sakho sezezimali?
Ukugxila ekutheni uyakwazi kangakanani kungaba ngumngcele obalulekile ekuthengeni kwakho ompompi, kukusize ukuthi ugweme ukusebenzisa ngokweqile nokuzisola ngokwenza kabusha kwakho. Ngenkathi usebenzisa isabelomali osisungulele izindlu zakho zangasese, bona ukuthi yimaphi ompompi nezici ezilingana nalolo hlelo.
Hlobo luni ompompi olusetshenziswayo emakhaya afanayo?
Enye indlela evivinywe neyiqiniso yokuthola ugqozi lokulungisa kabusha ukuphequlula imibono emakhaya afanayo. Dlula ezindaweni zokuhlala eziseduze nokuthi zinikezani - ngabe zithanda isitayela esithile noma isici sokucwila? Lokho kungakukhomba ngendlela ofuna ukuhamba ngayo, futhi.
Uma usukulungele ukwenza itompu yokuthenga i-remodel yakho yokugezela, yiza ku-Bathroom yanamuhla. Njengomhlinzeki ohola phambili we-Intanethi wezindleko eziqonde ngqo emikhiqizweni yokugezela, siyaziqhenya ngokunikela ngamanani afinyelela kuma-70% aphansi kuzo zonke izinhlobo zezinto zokugezela. Thenga iqoqo lethu lompompi online ukuze uthole inketho efanelekile kuwe.
Edlule :: Ungayikhetha Kanjani Ompompi Abalungile Besizinda Sakho Olandelayo: Isinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela Wokulungisa nokuthi Ungathenga Kanjani ompompi ku-inthanethi
2021 / 01 / 10 1170
2021 / 01 / 10 879
2020 / 12 / 21 5336
2020 / 11 / 19 4717
2020 / 11 / 19 4315
2020 / 11 / 16 4597